Ali Mohyadin – Page 2 – Warfaafiye:
Fahad Yaasiin oo juhdi iyo dhaqaale ku bixinaayo hal murashax
Ali Mohyadin Apr 22, 2018 0
Magaalada Muqdisho waxaa si xowli ah ugu socda loolanka iyo xod-xodashada loogu jiro codadka xubnaha baarlamaanka, iyadoo la filaayo in lagu dhawaaqo goorta ay dhacayso doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Somalia. Waxaa xilkaan u taagan…
Video: Wiil xubintiisa taranka ku waayay qarax ka dhacay Muqdisho oo la dayacay
Fadlan, hadaad awoodin muuqaalkaan waxaan kaaga digeynaa inaadan daawan, maadama uu ku jiro muuqaal adag. Waa dhibane C/fitaax C/llaahi Cali oo dhaawac noloshiisa iyo mustaqbalkiisa barkii baabi'iyay, qalbigiisa waxyeelayay. C/fataax ayaa…
Tirada Maraakiibta dagaalka ee Ruushka geysanayo saldhiga Somaliland ka dhisayo
Dowladda Ruushka waxaa ay wadahadal kula jirtaa Maamulka Somaliland, waxaana ay dooneysaa in ay saldhig Milatari ka dhisato magaalada Saylac ee Gobolka Awdal. Magaaladaas waxa ay ku taalla Badda Cas,waxaana ay isu muuqdaan Saldhigyada…
C/weli Gaas oo looga yeeray Imaaraadka & xog ku saabsan safarkiisa
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali "Gaas" ayaa Sabtidii u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta, kadib markii dhawaan uu joojiyay howlihii tababarka uu ka waday dalka Soomaaliya. Booqashada deg dega ee C/weli Gaas…
Gabar lix bilood jir ah ayaa lagu kufsaday laguna dilay gobolka Madhya Pradesh ee dalka Hindiya, falkaasi oo noqonaya kii ugu dambeeyay falal taxana aha oo kufsi loogu geystay caruur badan oo dalkaasi ku sugan, taasi oo lagu tilmaamay in…